Daaweyn lacag la’aan ah oo loo sameeyay in ka badan 300 oo carruur Agoon ah – Breaking News,Business, Kenya, Somalia, Politics, Lifestyle, Sports
Daaweyn lacag la’aan ah oo loo sameeyay in ka badan 300 oo carruur Agoon ah
Hay’adda khayriga ah ee Kalkaal Hospital Foundation ayaa tallaal iyo daaweyn lacag la’aan ah u sameysay tiro ka badan 300 oo carruur agoon Soomaaliyeed ah oo ku jira qaar ka mid ah dugsiyada waxbarashada gobolka Banaadir.
Maamulka Kalkaal Hospital Foundation ayaa warbaahinta u sheegay in ay tallaabadan ay u qaadeen kaddib markii ay ogaadeen baahida ay u qabaan carruurtan agoonta ah in ay hellaan daaweyn lacag la’aan ah.
Waxaa uu sheegay maamulka in uu sii wadi doono tabarucaadan caafimaad oo ay u sameynayaan bulshada qeybaheeda kala duwan gaar ahaan dadka ka soo jeeda qoysaska danyarta ah.
Waxaa jira qaliino lacag la’aan ah oo ay horay u fuliyeen oo lagu sameeyay waxaana ka mid ah qaliinada ay horay u sameeyeen boqolaal dadka faruuran ah oo loo sameeyay qaliin toliin ah kuwaa u badnaa carruur iyo gabdho da’doodu aad u yar tahay.
Sidoo kale maamulka Kalkaal Foundation ayaa sheegay in dhawaan dalka soo gaari doonaan dhakhaatiir u dhalatay dalka India oo la filayo in ay bulshada Soomaaliyeed uga faa’ideystaan howlihii caafimaad ee markii hore loo aadi jiray dalka dibadiisa.
Magaalada Muqdisho waxaa ku nool qoysas badan oo danyar ah iyo carruur ku agaantoobay dagaalladii dalka ka dhacay kuwaa oo mar walba u baahan in la gargaaro.
← Ra’iisal wasaare Abiy Ahmed oo booqday gobollka ay Oromadu degto
Magaalada Beledweyne qof u dhintay darbi ku soo dumay . →